Ry Mpiasam-panjakana Malalan’ny Tanànan’i Karachi, Amboary Io. (Raha tsy izany.) · Global Voices teny Malagasy
Ry Mpiasam-panjakana Malalan'ny Tanànan'i Karachi, Amboary Io. (Raha tsy izany.)
Voadika ny 14 Marsa 2016 8:37 GMT
Kamiao mpisoroka fako FIXIT manadio ireo lalan'i Nazimabad. Sary: #FIXIT / Facebook
Nandefa fanentanana “Amboary io” tamin'ny alalan'ny fandokoana ny endriky ny praiminisitra teo amin'ireo lava-tatatra misokatra ivelan'ny Anjerimanontolon'i Karachi, i Alamgir Khan tao Pakistàna. Etsy ankilan'ireo fihetsiny, nanoratra ny teny hoe “Amboary io!” i Khan.
Nanako mafy teny amin'ireo tanora tao Karachi ny fanentanana Fixit It, saingy tsy nisy fiantraikany loatra tamin'ny maro ny valitenin'ny tanàna. Vokatr'izay, nandefa fanentanana andiany faharoa i Khan, izay hiarahan'ireo olompirenena rehetra miara-mientana hanadio sy hanamboatra ireo làlana eo an-tanàna. Olompirenena maro no nanao sonia ny fanomezana fotoana farany ho an'ny tanàna mitaky fanavaozana ireo làlana efa simba, ireo tatatra tsy misarona, sy ireo làlana maloto amin'ny ankapobeny. Raha toa ka tsy hanamboatra ireo làlana ao Karacki ireo tomponandraikitra, mandrahona ny hanao ny asa ny vahoaka.
Nisy fiantraikany tamin'ireo manampahefana sasany ireo ezaka mahamenatra nataon'ny vahoaka, izay maro no nirohotra tampoka mba hamaha ireo olana niantraika tamin'ny tanàndehibe efa an-taona maro.
Fony vao nandefa ny fanentanana Fix It voalohany i Khan, niantefa tany amin'ny praiminisitra sy ny vahoakan'i Karachi ny antsony tao anatin'ny lahatsary iray tao amin'ny Facebook :
Alamgir Khan no anarako, mponina eto Karachi aho ary ny maha-Pakistaney no hany tena maha-izaho ahy. Mijoro eto ivelan'ny làlan'ny Anjerimanontolo aho, amin'izao alina izao ka avy eo ankavanako ny Anjerimanontolon'i Karachi. Olontsotra eto amin'ity tanàna ity aho. Tsy maintsy miatrika ireo olana marobe isankarazany ny olontsotra, mandeha miasa, mitatitra any amin'ny biraon'ny polisy ny fisian'ny heloka bevava. Atositosika tsy hanana fiarovana ireo zony fototra ny olontsotra. Ny rano, ny fanabeazana, ny fahasalamana, ary ny tatatra fanariana rano maloto – raràna tsy ho an'ireo olompirenena Karashi avokoa ireo filàna fototra andavanandro ireo. Izaho no tanoran'i Karashi ary tsy hijanona hangina intsony tahaka ny maro aho. Hanohitra aho ary hamerina ireo haka indray n y zoko. Fanentanana ho fanoherana rafitra iray simba ity, izay tsy niraharaha ireo olompireneny. Hataoko azo antoka ny hhavitàna mandoko ny endriky ny praiminisitra sy ireo tomponandraikitra mahefa hafa isaky ny làlana, arabe, na rindrina izay iatrehan'ireo olompirenana olana. Tiako hazava ny amin'io: tsy matahotra aho satria tsy liatram-bala ireo hevitra ireo.
Ka inona no hitranga raha tsy mamaly ny fepotoana farany napetraky ny Fixit It ny fanjakana? Miomana ny hanamboatra araka izay fantany ireo mpikatrona mafàna fo sasantsasany, raha toa ka mandray anjara amin'ny fanomezana vola ho an'ilay ezaka ireo hafa. Tao Nazimabad, niasa nanadio ny arabe ireo mpikatroka mafàna fo, nampian'ny traktora iray.
Tany amin'ireo faritra sasany, nanomboka nitranga ireo fiarabe mpandroaka fakon'ny tanàna :
Sarin'ny làlana ao Gulshan-e-Iqbal nodiovin'ireo tomponandraikitra ao an-tanàna. Sary: =FIXIT / Facebook.
Ankizy mpirenireny nanaraka ireo mpanao hetsika ihany koa, misalotra sarontava mampiseho ny endriky ny praiminisitra.
Sary: =FIXIT / Facebook.
Eo ambanin'ny sary ny fanazavan'ireo mpanentana:
Ady atao amin”ireo izay tomponandraikitra” ny adinay – tsy misy mpitarika politika. Raha manao ny asany izy ireo, hanoratra fisaorana ho azy ireo izahay. Saingy raha tsy izany kosa, dia ho abaribarinay ry zalahy.
Ireo olom-pirenena izay nanaraka ny fanentanana dia milaza fa tian'izay ireo raha ny rehetra mba mahafantatra fa tsy ho zavatra maimaimpoana intsony ireny. Tao anaty lahatsary iray tao amin'ny pejiny Facebook, nanambara torolàlana iray ho an'ny mpilatsaka antsitra-po i Khan, izay mety handrisika amin'ny fanohizana ny asany manerana ny tanàna.
Tsy miantefa fotsiny amin'ny praiminisitra amin'ilay izy matory miesona aho, fa koa ho an'ireo olom-pirenena… raha tsy rototra hanampy ny vahoaka ny governemanta, tsy maintsy manao dingana ireo olom-pirenena. Mandefa antso amin'ireo izay manana fandavantena izahay, mba ho afaka hitambatra isika anjara hanampy ireo olom-pirenentsika isak'izay ilaina.
Ity no fanentanana misy famoronana sy firotsahana mampivondrona bebe kokoa ny fanohanana, sady manery haingana ireo tomponandraikitra eo an-toerana hihetsika.